နွေရာသီမှာ ကလေးငယ်တွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရေဓာတ်မဆုံးရှုံးရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ရာသီအလိုက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » နွေရာသီမှာ ကလေးငယ်တွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရေဓာတ်မဆုံးရှုံးရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ရေးသားသူ Yun Sandi Nan Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ hellosayarwon
ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာ ကိုယ်သောက်သုံးလိုက်တဲ့အရည်ဓာတ်ပမာဏထက် ခန္ဓာကိုယ်ကပိုသုံးစွဲမိတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အခါ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေနဲ့အရည်ဓာတ်အလုံအလောက်မရှိရင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မှာ ချို့ယွင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ အသက်ရှူထုတ်လိုက်တိုင်း၊ ချွေးထွက်လိုက်တိုင်း၊ ဆီးသွားလိုက်တိုင်း၊ မစင်စွန့်လိုက်တိုင်း ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ် လျော့ပါးရလေ့ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေနဲ့ အရည်ဓာတ်တွေကို ပြန်လည်မဖြည့်တင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုက နွေရာသီမှာ အရမ်းကိုအဖြစ်များပြီး လူတိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ ပိုအန္တရာယ်များပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ၊မွေးကင်းစအရွယ်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးတွေက အရည်ဓာတ်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းအကျဉ်းကိုတောင်မှ ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အတွက် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုခံစားရနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေမှာလည်း ရေသောက်ဖို့ သတိမရတာတွေရှိနိုင်တာကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပြီး ဆိးမထိန်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာ၊ပျို့အန်ခြင်း၊ဝမ်းပျက်ခြင်းတိုိ့လိုလက္ခဏာတွေအပြင် ဆေးဝါးတွေ ကြောင့်လည်း ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဆေးလိုမျိုး ဆေးဝါးသောက်သုံးမှုတွေကြောင့် လူကြီးတွေကို ချွေးပိုထွက်စေပြီး တစ်နေ့တာလုံး ရေပိုလိုအပ်စေပါတယ်။
ဆီးချိုကိုသေချာမကုသရင် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သလို ကျောက်ကပ်ဆေးတွေကလည်း ဆီးပိုသွားစေတာကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အရက်စွဲခြင်းတို့လို နာတာရှည်ဝေဒနာရှိသူတွေမှာလည်း ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အားကစားသမားတွေ အထူးသဖြင့် မာရသွန်၊စက်ဘီးစီး၊ရေကူးအားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊တံခွန်စိုက်ပွဲစဉ်တွေမှာလိုမျိုး အားကစားသမားတွေမှာ ချွေးထွက်များပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အရည်ဓာတ်ပမာဏဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းလိုမျိုး အလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်ရတဲ့သူတွေမှာ နေရောင်ထိတွေ့မှုများပြီး ချွေးထွက်များကာ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှု များနိုင်ပါတယ်။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာသိသာထင်ရှားတဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အဖြစ်များတဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှု လက္ခဏာတွေ တချို့ ကတော့ –
ရင်တလှပ်လှပ်တုန်ခြင်း (နှလုံးက တဒုန်းဒုန်းခုန်သလို ခံစားနေရခြင်း)
ကလေးတွေမှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုဟာ မပေါ့ဆသင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က အရည်ဓာတ်မလုံလောက် တော့သလို လုပ်ဆောင်ချက်မမှန်ကန်တော့ပါဘူး။
ကလေးက အငမ်းမရ ရေဆာလာတဲ့အထိ မဖြစ်စေပါနဲ့။ သူတို့တကယ်ရေဆာလာပြီဆိုရင် ရေဓာတ်လိုအပ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သင့်ကလေးမှာ အောက်ပါလက္ခဏာတွေအတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ရင် သတိထားပါ –
၈ နာရီအတွင်း ဆီးသွားနည်းလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝဆီးမသွားခြင်း
အသားအရေ အေးစက်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း
ငယ်ထိပ်ချိုင့်နေခြင်း၊ မျက်တွင်းကျနေခြင်း (မွေးကင်းစအရွယ်)
အသက်ရှူမြန်ခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း
အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာရင်တော့ ကလေးက ကယောင်ကတမ်းဖြစ်တာ၊ သတိလစ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စစချင်းလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ လျှာနဲ့အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း တို့ခံစားရတတ်ပြီး ဆီးအရောင်ကလည်း ပြောင်းနေတတ်ပါတယ်။ထိုက်သင့်သလောက် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆီးအရောင်ဟာ အဝါဖျော့ဖျော့နဲ့ ကြည်နေရပါမယ်။
ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးလွန်းနေချိန်မှာ သေချာမထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ဓာတ်ဆားဓာတ်မမျှတခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သွေးထုထည်နည်းခြင်း(hypovolemic shock)၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ အပူဒဏ်သင့်ခြင်းတို့ကြောင့် တက်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်းအပြင် ကိုမာ ရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းတို့အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ဆွေးနွေးအကြံပြုချက် ရယူသင့်ပါတယ်။
ဆွဲဆိတ်ကြည့်ပြီးနောက် တွန့်ခေါက်သွားတဲ့ အရေပြားကပြန်မပြန့်တော့လောက်အောင် ခြောက်သွေ့နေခြင်း
စိတ်ဆတ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အာရုံရှုပ်ထွေးခြင်း
အောက်ပါအချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာရုံနဲ့နွေရာသီအပူဒဏ်အောက်မှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ –
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုပ်ခင်နဲ့ လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ရေများများသောက်ပါ။ အပြင်မှာ ရာသီဥတုပူနေချိန်နဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ သတိထားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဓာတ်ဆားရည်သောက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်၊ လုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ရေများများသောက်ပါ။
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအလုပ်လုပ်နေရတာ တစ်နာရီထက်ပိုကြာမယ်ဆိုရင် ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ တစ်ကြိမ်လောက်ရေ သို့မဟုတ် ရေဓာတ်ဖြည့် အချိုရည်တွေ နည်းနည်းချင်းသောက်ပါ။
ကလေးကို အရည်များများသောက်ချင်လာအောင် ချော့တိုက်ပါ။
ပရိုတင်းဓာတ်များလွန်းတဲ့အစားအစာတွေ ရှောင်ပါ။ ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတဲ့အခါ တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး ရေ ၈ ခွက်ကနေ ၁၂ ခွက်အထိ သောက်ရပါလိမ့်မယ်။
အရက်၊ဘီယာ၊ ဝိုင်တို့ကို ရှောင်ပါ။ သူတို့က ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ပိုဆိုးစေပြီး ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကို အားနည်းစေပါတယ်။
လူကြီးတွေကိုရော၊ ကလေးတွေကိုပါ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစာအာဟာရတွေကျွေးပါ။ စွပ်ပြုတ်ရည်၊ ဒိန်ချဉ်၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားသင့်ပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေက သက်ကြီးပိုင်းတွေအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ပမာဏကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းမူးနေရင်၊ အရမ်းနုံးချိနေရင်အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။
အပြင်က နေပူထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရဖို့ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဆိုရင် ပေါ့ပါးပြီး အရောင်ဖျော့တဲ့ အဝတ်အထည်ကို တစ်ထပ်တည်းဝတ်ပါ။ ချွေးတွေရွှဲလာရင် အမြန်ဆုံးအဝတ်ခြောက်နဲ့လဲဝတ်ပါ။ ဆွဲသားဝတ်စုံနဲ့ ဘယ်တော့မှ အားကစားမလုပ်ပါနဲ့။
Health Group သည်ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများမပြုလုပ်ပေးပါ။
ကလေးတွေကိုနွေရာသီနေလောင်ဒဏ်မှကာကွယ်မယ်-နေလောင်ခံခရင်မ်, အဝတ်အထည်, ဦးထုပ်နှင့်အခြားအရာများ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဧပွီ 24, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဧပွီ 24, 2019
Dehydration: Symptoms, Causes, Treatments. http://www.medicalnewstoday.com/articles/153363.php?page=2.
Dehydration in Adults. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/dehydration-adults?page=2.
What is Dehydration? http://www.news-medical.net/health/What-is-Dehydration.aspx.
မုတ်သုံမှာ ခြေထောက်လေးကို ဒီလိုဂရုစိုက်ပါ